मनोरंजन Archives - Onlines Time
Dec192021 by onlinestimeNo Comments
Dec162021 by onlinestimeNo Comments
के ‘बले’लाई राम्री केटि देख्नै नहुने हो ? बलेले नै फिजाएको हुन् प्रिज्मासँग प्रेमको हल्ला ?(हेर्नुस् भिडियाे)
टिकटकवाट उदाएकी मोडल प्रिज्मा खतिवडा र हास्य कलाकार सागर लम्सालबीचको सम्वन्ध निकै आगाडिदेखि चर्चामा छ। कहिले उनिहरुको प्रेमका कारण चर्चा भयो भने अहिले भने ‘ब्रेकअप’का कारण चर्चा चलिरहेको छ । ब्रेकअपको चर्चापछि प्रिज्मा र प्रिन्सिले केही मिडियामा अन्तर्वार्ता पनि दिएका छन् । उक्त अन्तर्वार्तापछि सागर लम्सालको सामाजिक सञ्जालमा निक्कै आलोचना भयो। एउटा अन्तरवार्ताका क्रममा प्रिन्सीले आफ्नो प्रेमको कुरालाई लिएर आँशु झारेपछि सबैले प्रिज्मा सम्झेर सागरलाई गाली गरे। कतिपयले प्रिन्सीलाई पनि प्रिज्मा ठानेर नकारात्मक कमेन्ट गरे । त्यसपछि प्रिज्माले सागरसँग सार्वजनिक कार्यक्रममा माफी मागिन। ‘एक अन्तर्वार्तामा प्रिन्सी रोएकी थिइन् । दर्शकले म रोएको र रुनुको कारण सागर लम्सालसँगको प्रेम बुझनु भएको कारण सागर सरलाई गाली दिनुभएको छ’ प्रिज्माले भनेकी छिन्–‘दर्शकको बुझाइमा केही गलत रह्यो । त्यो समय ब...
प्रिज्माले पहिलो पटक प्रेमका बारेमा खुलेर भनिन्, मैले प्रेममा कहिल्यै पनि सम्मान पाइन् सबै भन्दा बढी घृ’णा उनैलाई गर्छु (भिडियो हेर्नुस्)
कलाकार सागर लम्सालसंग प्रेममा परेको चर्चामा रहेकी प्रिज्माले आफुले प्रेममा सम्मान नपाएको बताएकी छन् । बलेसंगको व्रेकअपको चर्चा सुरु भएसंगै उनको यस्तो अभिब्यक्ति पनि सार्वजनिक भएको छ । उनले आफ्नो अभिब्यक्तिमा सागरको नाम त लिएकी छैनन् तर आफुले अब कुनै बेला प्रेममा रहेका ब्यक्तिलाई सबैभन्दा बढी घृ णा गर्ने पनि बताएकी छन् । उनले आफुले जस्तै अरु कसैले पनि आफ्नो प्रेमीवाट सम्मान नपाएको अवस्था छ भने त्यस्तो ब्यक्तिवाट टाढा जान सुझाव पनि दिएका छन् । टीकटकबाट उदाएकी प्रिज्मा र भद्रगोल टिभी सिरियलबाट आएका बले केही वर्षदेखि प्रेममा रहेको चर्चा चुलिएको थियो । उनीहरुले यसवारे सार्वजनिक अभिब्यक्ति पनि दिएका थिएनन् । प्रेम होइन भनेर पनि भनेका थिएनन् । तर सामाजिक संजाल टिकटकमा उनीहरुले संगै बनाएका धेरै भिडियोहरु छन् । उनीहरुले धेरै म्युजिक भिडिओ पनि सँगै गरेका थिए । फागुनमा बिहे गर्ने चर्चा पनि ...
लोक गायिका शान्ति श्री परियारको जीवन कहानीले सबैलाई रुवायो, गिट्टी बालुवा बोकेर गायिका बनिन (भिडियो हेर्नुहोस्)
प्रकाश सपुतको गीत ‘बोल मायाँ’ र ‘गलबन्दी’ कि गायिका शान्तिश्री परियार अहिले गीतको रेकर्डमा ब्यस्त छिन । लोकदोहरी गीतबाट आफ्नो गायकी जीवन आरम्भ गरेकी गायिका परियारले धेरै तीज गीतहरु पनि आवाज दिइसकेकी छन्, जसमध्ये धेरै तीज गीतहरु हिट भएको उनको दाबी छ । गायिका परियारले वि.सं. २०६८ सालमा एकल एल्बम ‘घर छ तीनतले’ लाई औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । त्यसपछि २०७१ साल तिर ‘माछीलाई फुर्लुङ्ग’, ‘एकतर्फी माया’ लगायतका गीतहरु बजारमा ल्याएकी थिइन् । गायिका परियारले पहिलो पटक धेरै भावुक भएको गीत ‘बोल माया’ नै भएको बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘यो गीत गाउँदा म आफै पनि धेरै पटक भावुक भएकी थिँए । यो गीतका सबै शब्दहरु सेन्टिमेन्टल नै छन् । ‘स्वर्गको बाटो अप्ठ्यारो होला कसरी जाउला नि, एक मूठी पानी ख्वाउन नि पाइन तीर्खा पो लाउला नि’ यी सबै शब्द मार्मिक छन् ।’ ‘त्यस्तै यो गीतको भिडियो पनि धेरै मार्म...
Dec12021 by onlinestimeNo Comments
आज पनि नेपालीहरु रोजगारीकै शिलशिलामा परदेश पलाएन हुन पर्ने बाध्यता छ। महिनौ लाखौ को संख्यामा नेपालि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु परिवारको खुशी खोज्न आफु बेचियर खाडि मुलुक भासिएका छन्। परिवारकै लागि भनेर प्रदेश पसेका उनीहरु बाकशामा गुम्सिएर फर्किनु पर्दाको पिडा साच्चिनै सहनै नसक्ने हुन्छ। यस्तै घटनाहरुलाई समेटेर लोकप्रिय गायक राजु परियार र गायिका मेनुका परियारको सुमधुर आवाजमा बहुप्रतिभाका धनि सर्जक तथा गायक राजु परियारको लय तथा शब्द संकलनमा बनेको मनै छुने लोक गित भिसा लाग्यो टिकटै आयो बजारमा सार्बजनिक भयको छ। भिडियो तर्फ निशाना बानियाको निर्देशन रहेको छ भने सुरेश श्रेष्ठ को छायांकन रहेको छ र शिब पौडेलको उत्क्रिष्ट सम्पादन रहेको छ। उक्त भिडियोमा राजु परियार , अपेक्षा पौडेल , भिम दुरा र आशा पुनको मनै छुने अभिनय रहेको छ। रेजिना संगीता संगमको ब्यानरमा बनेको उक्त लोक गीतलाई राजु परियार अफिसियल ...
काठमाडौं, इन्द्रेणीमा कार्यक्रममा दोहोरी गायर सबैको मन-जितेका एक सांगीतिक जोडी हुन् मेक्सम खाती र चन्दा अर्याल। यो जोडीले गायका हरेक दोहोरीले धेरै दर्शकहरुको मुटुनै चुडाउने गरेको पाउन सकिन्छ। एक प्रेम जोडी भयर पनि अलग-अलग जिबन बिताउन बाध्यता-भयका कहानी दुबैले गायका दोहोरीमा पाउन सकिन्छ। यो संगै धेरै दर्शकहरुले पनि दुबैलाई भन्दै आयको पाइयो कि कुनै समय यो रियल जोडी भयको हुन सक्छ, तर त्यो भने नहोला। दुबैले गायका हरेक सब्दहरुमा दर्शकले एकातिरबाट संका-गर्ने कुरा पनि कुनै नौलो नहोला किनभने यो भन्दा अगाडि पनि धेरै कलाकारहरुको यसरीनै नाम जोडियर आयको थियो। दुबैको दोहोरी हेर्दा कुनै समय हासी-खुसी जिबन बितायका प्रेम जोडीहरु बाध्यताले-गर्दा अलग-अलग हुदाको पिडा-साच्चै त्यो प्रेम जोडीको मन दुबैको गीतका सब्दले कति छुन्छ होला त्यो त हामिहरु कल्पना समेत गर्न सक्दैनौ। त्यस्तै गरेर भर्खर मात्र मेक्सम...
Nov262021 by onlinestimeNo Comments
विगत लामो समयदेखि प्रवासमा रहेर पनि नेपाली गीत संगीतलाई निरन्तरता दिइरहेका गायक तथा संगीतकार हुन् खेम पुन। विशेषगरी लोकगीत संगीतप्रति अत्याधिक झुकाव राख्ने खेम यतिबेला अमेरिकामा छन् । त्यसो त, अमेरिका भए पनि गीत संगीतमा सक्रिय भइराख्छन् उनी। गाउनमा औधी रुचि राख्ने खेमले संगीत सृजना पनि उत्तिकै अब्बल गर्छन् । उनको आवाज र संगीत सृजना रहेका दर्जनौं गीतहरू दर्शक स्रोतामाझ लोकप्रिय छन् । यसैबीच, उनले संगीत सृजना गरेको पछिल्लो गीत यतिबेला बजारमा छ। केही दिन अघि रिलिज भएको “आइपुग्यो बाग्लुङ बजार” बोलको पञ्चेबाजा गीतमा खेमको मौलिक संगीत रहेको छ। गीतको शब्द अब्बल सर्जक नवराज पन्तले लेखेका हुन् ।भने, लोकप्रिय गायक वसन्त थापा र जुना श्रीष मगरको सुमधुर आवाज गीतमा सुन्न सकिन्छ। गीतका शब्द निकै मनछुने छन् । त्यसै अनुरुप खेमले पन उत्कृष्ट संगीत दिएका छन् । प्रायः बाग्लुङ तिर प्रचलित मौलिक पन्...
लोकप्रिय सिरियल कान्छि सिरियलमा कान्छिको छोरीको सबैलाई रुवाऊने वास्तविक कहानी, सबैले हेर्नुहोस् (भिडियोसहित) । लोकप्रिय सिरियल कान्छि सिरियलमा कान्छिको छोरीको सबैलाई रुवाऊने वास्तविक कहानी, सबैले हेर्नुहोस् (भिडियोसहित) भिडियो हेर्नुहोस् याे समचार पनि पढ्नुहोस् अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसिसीको विषयमा पाँच दलीय गठबन्धनले निर्णय गर्ने बताउनुभएको छ । आज यहाँ पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उहाँले गठबन्धनको सरकार भएकाले उसैको निर्णयानुसार चल्ने बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “ यसबारे गठबन्धनभित्र छलफल भइरहेको छ । सरकारमा पनि छलफल जारी छ ।” देशको विकास, प्रगति, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि अहिलेको सरकार बनेको भन्दै उहाँले हरेक निर्णय गठबन्धनबाटै हुने बताउनुभयो । अर्थमन्त्री शर्माले विदेशी लगानी, विकास निर्माण र कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार लागिरहेको छ...
Nov162021 by onlinestimeNo Comments
टिका सानु पछिल्लो समयकी निकै नै लोकप्रिय गायिका हुन् । दाङकी टिकाले लाईभ दोहोरी गाउँदै आफ्नो कला यात्रा थालिन् । त्यसपछिका दिनहरुमा इन्द्रेणी मार्फत अझै चर्चा पाउँदै दर्शक, श्रोताहरुको मन जितेकी टिकाले पछिल्लो समय भने इन्द्रेणी छोडिन् । इन्द्रेणी छोडेपछि उनले दर्शकहरुबाट माया र गाली दुवै पाईन् । पछिल्लो समय उनले आफ्नै युटुब च्यानल मार्फत दर्शहरुलाई लाईभ दोहोरी पनि प्रस्तुत गरिरहेकी छिन् । त्यस्तै हिमालय टिभीमा पनि सँगीत माला कार्यक्रम मार्फत उनी सबै माँझ पुगिरहेकी छिन् । साथै उनको एक टेलि सिरियल कथा माईलीको पनि प्रसरण भैरहेको छ । यो सिरियल उनकै कथामा आधारित छ । लाइभ दोहोरी भन्ने बित्तिकै हामीले झट्ट गायिका टिका सानुलाई सम्झना पुग्छौ। गायिका टिका सानुले गाएको हरेक लाइभ दोहोरी निकै उत्क्रिष्ट रहन्छन। सबै संग्ग निकै मिठो बोल्ने अनि ब्यबहारमा पनि निकै पक्का उनि अहिले हरेक दर्शकको मन मुटु...